कसरी तनावले वजन बढाउनको कारण गर्दछ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
कसरी तनावले वजन बढाउन सक्छ
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 15, 2018 | लाइफ कोचिंगको बारेमा, आहार र पोषण, जीवन कोचिंग |0|
1 तनाव राहत
2 तनाव र वजन को बारे मा अधिक जानकारी
"दीर्घकालीन तनाव र कोर्टिसोलले तौल बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ" -एलिजाबेथ स्कट*
तनाव एउटा सबैभन्दा ठूलो कारक हो जुन आजका धेरै मानिसहरूमा वजन र मोटाईमा योगदान पुर्‍याउँछ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तनावले अनावश्यक तौल प्राप्त गर्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ र ती मध्ये एकलाई लडाई वा उडान प्रतिक्रिया भनिन्छ।
जब हाम्रो शरीरमा तनाव हुन्छ हामी लडाई वा उडान प्रतिक्रिया सक्रिय गर्दछौं। यसले हाम्रो शरीरमा एड्रेनालिन र कोर्टिसोल जस्ता विभिन्न हार्मोनहरूको रिलीज ट्रिगर गर्दछ।
यी हार्मोनहरूले मुटुको दर, सुस्त पाचन, प्रमुख मांसपेशी समूहहरूमा रगत प्रवाह बन्द गर्दछ र अन्य विभिन्न स्वायत्त नर्भिक कार्यहरू परिवर्तन गर्दछ। यसले शरीरलाई पर्याप्त उर्जा र शक्ति दिन्छ कि त लडाई गर्न वा खतराबाट भाग्न।
यो हाम्रो शरीरको आफैंको सुरक्षाको प्राकृतिक तरीका हो तर आजको तनावमा हामीले आफूलाई कसैसँग लड्न वा आफैलाई बचाउन भाग्नुपर्दैन। हरेक दिन हामीसँग तनावपूर्ण समयहरू छन् जुन हामीले सामना गर्नुपर्दछ, जस्तै ट्राफिकमा वा काममा तनावपूर्ण दिनमा।
त्यसोभए, जब हामी आफ्नो तनावपूर्ण वातावरणबाट घर फर्कन्छौं, हाम्रो शरीरहरू आफैं भर्नका लागि तयार हुन्छन्। तिनीहरू आरामको प्रतिक्रिया द्वारा आफ्नो सामान्य राज्यमा फर्कन आवश्यक छ। यदि हामीले हाम्रो शरीरलाई आराम गर्न दिदैनौं भने, तब हाम्रो शरीरमा रहेका सबै तनावले हानी गर्न थाल्नेछ।
जब हाम्रो शरीर तनावमा हुन्छ, हार्मोन कर्टिकोट्रोफिन र एड्रेनालिन निकालिन्छ। यी हार्मोनहरूले एक प्रतिक्रिया उत्पादन गर्दछ जुन एड्रेनल कोर्टेक्सबाट कोर्टिसोलको रिलीजलाई उत्तेजित गर्दछ।
कोर्टिसोलले रक्त प्रवाहमा ग्लूकोज निकाल्छ। जब हामी धेरै तनावग्रस्त हुन्छौं, ग्लुकोजले हाम्रो शरीरमा प्रशस्त मात्रामा इन्सुलिन निकाल्छ। इन्सुलिन अन्तःस्रावी प्रणालीको अंश हो जुन फ्याट भण्डारण हर्मोन हो।
यो हार्मोनले तनाव संकेत ओभरराइड गर्दछ एड्रेनालिनबाट फ्याट जलाउनका लागि। इन्सुलिनको अत्यधिक रिलीजले शरीरलाई पेट र फिलामा फ्याट भण्डार गर्न सन्देश दिन्छ।
हार्मोन कोर्टिसोलले वजन बढाउनको लागि अन्य तरिकाहरूमा पनि योगदान गर्न सक्छ जस्तै मेटाबोलिज्म र लालसा।
मेटाबोलिज्म: जब हामी तनावमा हुन्छौं, र हाम्रो शरीरले कोर्टिसोल राख्न थाल्छ, यो हर्मोनले हाम्रो मेटाबोलिज्मलाई सुस्त बनाउन सक्छ, सामान्यतया हुने बढी वजनको कारण। यसले डाइटिंगलाई अझ गाह्रो बनाउँछ।
तृष्णा: यदि हाम्रो शरीर धेरै तनाव भित्र छ भने, तिनीहरूले मोटा, नुन, मीठो र मिठो खानाहरू, प्रशोधन गरिएको खाना र हाम्रो लागि राम्रो छैन कि अन्य चीजहरू चाहना गर्न सक्छन्।
यी खानाहरू सामान्यतया कम स्वस्थ हुन्छन् र बढि वजन बढाउनको लागि नेतृत्व गर्दछन्, किनकि त्यसले हाम्रो शरीरलाई थप सुरक्षा महसुस गर्दछ। त्यहाँ अन्य तरिकाहरू पनि छन् जुन हाम्रो शरीरले बोसो चर्काइदिन्छ, जस्तै भावनात्मक खानाहरू, फास्ट फूड र पर्याप्त व्यायाममा।
भावनात्मक खाना: भावनात्मक खानाहरू बोसो प्राप्त गर्न सजिलो तरिका हो, किनकि जब हामी क्रोधित हुन्छौं, दु: खी वा निराश हुन्छौं, तब हाम्रो शरीरले उनीहरूलाई समर्थन चाहिन्छ भन्ने संकेत पठाउँदछ।
हाम्रो शरीरले यस हार्मोन कोर्टिसोलको उत्पादन गर्न थाल्छ, जसले हामीलाई अस्वास्थ्यकर खानाको चाहना गर्दछ ताकि हाम्रो शरीर सबै तनावबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्दछ।
हर्मोन कोर्टिसोलले नर्भस उर्जाको अधिक मात्रा पनि निकाल्छ, जसले प्राय जसो मानिसहरूलाई उनीहरू भन्दा बढि खाने गर्छ।
फास्ट फूड: फास्ट फूड खाने पनि हाम्रो प्रणाली मा धेरै तनाव र दुरुपयोग पैदा गर्न सक्छ, विशेष गरी, यदि हामी सही छैन र हतार मा छन् भने। हाम्रो जीवनमा जति बढी तनाव हुन्छ त्यति नै हाम्रो शरीरलाई उनीहरूको सुरक्षा महसुस हुन्छ र उनीहरू आफैले सन्तुलित हुन कार्य गर्दछन्। यसको मतलब बढी तौल राख्नु हो।
पर्याप्त व्यायाम छैन: हाम्रो शरीरलाई दैनिक व्यायामको राम्रो मात्रा चाहिन्छ, स्वस्थ र बलियो महसुस गर्न। यदि हामीले थोरै दिन पनि केही व्यायाम प्राप्त गरेनौं भने हाम्रो शरीरले हामी आफैंलाई बोक्ने तरिकामा तनाव महसुस गर्न थाल्छौं, हामी बसेर खडा हुनेगरि। व्यायाम हाम्रो शरीरलाई आकारमा राख्नको लागि आवश्यक छ, ताकि हामी स्वस्थ रहन कडा परिश्रम गर्नुपर्दैन।
दैनिक तनाव कम गर्न यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हाम्रो शरीरहरूले कडा परिश्रम गर्नुपर्दैन र प्राकृतिक वजन घटाउने प्रक्रिया सुरु गर्दछ।
यी सबै सुझावहरूको पालना गर्न धेरै धेरै हुन सक्छ यदि हाम्रो दिन एक धेरै व्यस्त हो, तर यदि हामी यी मध्ये कुनै पनि लागू गर्छौं भने, हाम्रो दैनिक जीवन बढी तनावमुक्त हुनेछ र यो हाम्रो शरीरको लागि एक वजन घटाउने उपाय जस्तै हुनेछ।
तातो नुहाउने वा नुहाउने: तातो नुहाउने वा स्नान लिनुहोस् काम समाप्त भएपछि बेलुका। तातो नुहाउने वा नुहाउने हाम्रो शरीरमा सबै मांसपेशिहरूलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ, सबै निर्मित तनाव र अधिक एड्रेनालाईनको जारी प्रदान गर्दछ।
मसाज: मसाज प्राप्त गर्नाले हाम्रो शरीरलाई आराम र निर्माण तनाव र तनावलाई मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ तर यसले हाम्रो शरीरलाई अझ लचिलो र कान्छो देखिन मद्दत गर्दछ।
हामी सुख्खा मालिश वा तेल मालिश लिन सक्दछौं जुन हामी बढी आराम गरीरहेका छौं। दुबै राम्रा छन्।
गहिरो सास फेर्दै: हामी हाम्रो अनुहारमा सुत्न सक्छौं र गहिरो सास फेर्न सक्छौं, हाम्रा सबै अंगहरूलाई आराम र आराम दिँदै। जब हामी झूट बोल्छौं हामी कल्पना गर्न सक्दछौं हामीबाट बनाइएको उर्जा शुटिंग हाम्रा औंलाहरू र औंलाहरूको माध्यमबाट। हामी केही आराम संगीत पनि लगाउन सक्छौं। यहाँ कुञ्जी गहिरो सास लिनको लागि हो र हाम्रो सबै अंगहरूले बनाएको तनावलाई छोडिदिनुहोस्।
योग: हामी हाम्रो योग बनाउने तनाव जारी गर्न केहि तान्न योग गर्न सक्छौं। योग व्यायामको एक रूप हो जसले हामीलाई हाम्रो मांसपेशिको तनाव दिन्छ तर यो तनावको बिभिन्न प्रकार हो जसले हाम्रो जोडी र मांसपेशिको स्वस्थ दृढता बढाउन मद्दत गर्दछ। योगमा केन्द्र र दिमागलाई शान्त पार्न मद्दत गर्ने क्षमता पनि छ। यो एक महान तनाव रिलीभर हुन सक्छ।
हिड्दै: लामो आरामदायी पैदल बाहिर लिनु बाहेक हामीले ताजा हावा सास लिन र सबै भण्डार गरिएको उर्जा रिलीज गर्न सकौं। जोन ग्रे आफ्नो पुस्तकमा भन्छन् कसरी तपाईले चाहानुहुन्छ र तपाईले चाहानुहुन्छ कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ: बोटबिरुवा, रूखहरू र पानीका ठूला शरीरहरू जस्तै तालहरू र समुद्रमा हाम्रो नकारात्मक उर्जा र तनाव लिन र यसलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने अद्भुत क्षमता छ। बढ्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी कुनै स्फूर्ति महसुस गर्दछौं जब हामी पार्कमा वा ताल नजिकै बाहिर हिंड्न जान्छौं।
आचार्य डी हरग्रीवेस, दुई स्वास्थ्य पुस्तकहरु का एक प्रकाशित लेखक हो, डाइजेस्ट एलाइव हार वजन र एक महान निकाय प्राकृतिक रूप बाट, डाइजेस्ट एलाइव द नेचुरल क्युर टु हार्टबर्न र http: //www.n Natural-way-to-lose- वजन को मालिक -fast.com एक वेबसाइट अधिक वजन र मोटाई मानिसहरूलाई उनीहरूको वजनको समस्यामा मद्दत गर्न समर्पित।
“मोटाई र अधिक तौलका मुद्दाहरू हाम्रो शरीर असंतुलितको स signs्केत हुन्, स्वाभाविक रूपमा तौल घटाउन र यसलाई बन्द गर्न, हामीले हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित हुनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्न आवश्यक छ, जब यो घट्छ भने हामी छिटो तौल घटाउँदछौं र यसलाई बन्द राख्छौं। " उस्ले भन्यो।
आफ्नो खाली समयमा उनी एक्सएनयूएमएक्सडी मोडलि do गर्न र कला र लेखनको साथ काम गर्न मन पराउँछन्, आचार्य डी हरग्रिभ्स आफ्नो अद्भुत परिवारको साथ जैविक फलफूलको बगैचामा बस्छन्।
लेख स्रोत: http://EzineArticles.com
*एलिजाबेथ स्कट एक कल्याण कोच, स्वास्थ्य शिक्षा, र पुरस्कार-विजेता ब्लगर सल्लाहकार, परिवार थेरापी, र स्वास्थ्य मनोविज्ञान मा प्रशिक्षण संग। एलिजाबेथले व्यक्तिगत ग्राहकहरू र समूहहरूको साथ काम गर्दछ, र तनाव व्यवस्थापनमा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्दछ, जीवनको उच्च गुणस्तर कायम गर्दछ, र स्वस्थ जीवनसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू। उनले About.com को तनाव व्यवस्थापन साइटमा सबै सामग्री सिर्जना गर्दछ, र 's' को बारे मा स्वास्थ्य सेवा को लागी स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार पत्र सम्पादन गर्दछ।
तनाव र वजन को बारे मा अधिक जानकारी
बढ्दो दवावको साथ धेरै मानिसहरूले सामना गरिरहेका छन्, तनावले कसरी वजन बढाउन महत्वपूर्ण छ भनेर जान्दछ। हामी तनाव व्यवस्थापन गर्ने तरीका विविध र हाम्रो व्यक्तिगत परिस्थितिमा निर्भर हुन सक्छ। अधिक सहयोगी लेख र सल्लाह पाउनुहोस् जुन हाम्रो मा वजन बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ वजन घटाउने सेक्सन.
यदि यस लेखले तपाईंलाई प्रेरित गर्यो तपाइको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस, त्यसोभए dayso दिनको ई-बुकमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् किन्नुहोस् तपाईले लिनु भएको उत्तम निर्णय मध्ये एक हुन सक्छ।
सायद तपाईलाई वजन को समस्याहरु को लागी एक जीवन कोच को सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी प्रेरित भएको छ? को NLP लाइफ कोच निर्देशिका तपाईको क्षेत्रमा व्यक्तिगत कोच, सम्बन्ध कोच र NLP व्यवसायीहरू सूचीबद्ध गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय। धेरै प्रस्ताव टेलिफोन, स्काइप र अनलाइन सेवा तपाईं जहाँ तपाईं अवस्थित छन् पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्तिगत विकास क्याफेमा हामी विश्वास गर्दछौं कि ज्ञान साझा गर्नु सफलताको उत्तम मार्ग हो। यदि तपाईं एक टिप्पणी थप्न चाहानुहुन्छ, लेख पोष्ट गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् वा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् कृपया तल हाम्रो टिप्पणी फाराम प्रयोग गर्नुहोस्।
पछिल्लोनमूना लाइभ इन केरर CV / पुनःसुरू टेम्पलेट
अर्कोसम्मोहन वजन घटाउने पाठ्यक्रमहरू
मोरिंगाका Major प्रमुख स्वास्थ्य लाभहरू
कसरी जीवन कोच बन्ने
जुन 16, 2018
चिनी cravings प्राकृतिक तरीकाले रोक्नुहोस्
अप्रिल 17, 2018
जीवन कोचिंग प्रश्न र उत्तरहरू हुन सक्छ
तपाईले आफैंलाई कुनै चीजले शान्ति ल्याउन सक्दैन।
- राल्फ वाल्डो इमरसन